प्रचण्ड आन्तरिक परामर्शमा, आज बेलुकासम्म राजीनामा दिने तयारी !
» प्रचण्ड आन्तरिक परामर्शमा, आज बेलुकासम्म राजीनामा दिने तयारी !
काठमाडौँ - प्रधानन्यायाधिस शुशिला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि एकाएक विवादमा तानिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तत राजीनामा दिने भएका छन् । 'राजीनामा दिने वा संसद विघठन गर्ने' भन्ने परामर्शमा रहेका उनी अन्तत राजीनामा दिन तयार भएको स्रोतले बताएको छ ।
उनले राजीनामा दिएसँगै चुनाव भने सर्ने पक्कापक्की भएको छ । त्यससँगै अवको प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने कुरा पनि चर्चाको अर्को विषय बनेको छ । परामर्शका क्रममा कहिले चुनाव गराएरै छोड्न दवाव दिएको भएपनि अहिलेकै स्थितिमा चुनाव गराउन नहुने निष्कर्षका साथ उनले राजीनामा दिन लागेको स्रोतको भनाइ छ । 'आज बेलुकासम्म प्रचण्डको राजीनामा आउँछ ।' स्रोतले भन्यो ।